Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 13:19
1 786 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 11:33 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Septambra 2019 à 13:19 (hanova) (esory)
=== Ny orim-bintana roa ambin'ny folo ===▼
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady fa mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny izy.
Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady sy ny vonto Alahamady ary ny vody Alahamady. Ny vava Alahamady ao amin'ny volana Alahamady dia atao hoe [[Alahamadibe]]. Inoana ho vintan'[[andriana]] sady vintana maha mpanjaka ny Alahamady. Ny Alahamady no vintana mahery indrindra<ref name=":0"><small>Jobily Rakotoson, "L'art divinatoire, parole d'un sage" in ''Madagascar fenêtres'', 2002, p.95.</small></ref>. Mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adalo ny Alahamady fa mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny izy.
Ny [[Adaoro]] no vintana sy volana faharoa. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اثور / ''Ath-Thur'' na ''Ath-Thaur'' ("ombilahy") ny hoe ''Adaoro''. [[Zanabintana]] ny Alohotsy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro. Mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro. Trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro.
==== Adizaoza ====▼
Vintana sy volana fahatelo ny [[Adizaoza]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجوزاء / ''Al-Djuza'' ("kambana") ny hoe ''Adizaoza''. Zanabintana ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Vintana mahery ny Adizaoza ka ny olona ateraka aminy dia "miozanozana" raha tsy alam-bintana. Ny [[Alakaosy]] no mifandratra amin' ny Adizaoza. Eo amin' ny Adizaoza no fitoeran'ny sinibe ao an-trano. Izay olona mikasa hampaka-bady, na hanorin-trano, sns., nefa sendra mifandratra amin'ny vintany ireo andro tsara fanaovana izany, dia ny Adizaoza no tokony hofidiny, fa io tsy mihetsiketsika tahaka ny sinibe, ka hampateza ny zavatra kasaina hatao.▼
==== AsorotanyAdizaoza ====
Vintana sy volana fahefatrafahatelo ny [[AsorotanyAdizaoza]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small>اجوزاء / ''AsAl-Saratan'' na ''As-SartanDjuza'' ("fozakambana") ny hoe ''Asorotany.Adizaoza''. [[Renivintana]]Zanabintana ny AsorotanyAdizaoza. Ny zoron-tranotoerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-atsinanatrano antsinanana. Eo amin' ny Adizaoza no toeranafitoeran'ny omenasinibe azyao an-trano. AndroNy mahery[[Alakaosy]] koa,no arakamifandratra amin' ny finoan-drazanaAdizaoza malagasy,sady miarina eo amin'ny Asorotany[[Adijady]]. Baben'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Adizaoza.
▲VintanaMitondra sy volanatonon'andro fahateloroa ny [[Adizaoza]]., Avydia amin'ny anaran'antokon-kintanavava amin'nyAdizaoza teny arabo hoe اجوزاء / ''Al-Djuza'' ("kambana")sy ny hoevody ''Adizaoza''. Zanabintana ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Vintana mahery ny Adizaoza ka ny olona ateraka aminy dia "miozanozana" raha tsy alam-bintana. Ny [[Alakaosy]] no mifandratra amin' ny Adizaoza. Eo amin' ny Adizaoza no fitoeran'ny sinibe ao an-trano. Izay olona mikasa hampaka-bady, na hanorin-trano, sns., nefa sendra mifandratra amin'ny vintany ireo andro tsara fanaovana izany, dia ny Adizaoza no tokony hofidiny, fa io tsy mihetsiketsika tahaka ny sinibe, ka hampateza ny zavatra kasaina hatao.
==== Alahasaty ====▼
Ny [[Alahasaty]] no vintana sy volana malagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسد / ''Al-Asad'' ("liona") ny hoe ''Alahasaty.'' Zanabintana ny Alahasaty. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Lazaina ho vinta-mpamosavy sy andron'ody ny Alahasaty. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty.▼
==== AsombolaAsorotany ====
Vintana sy volana faheninafahefatra ny [[AsombolaAsorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة<big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-SumbulSaratan'' na ''As-Sartan'' ("virjinafoza") ny hoe ''AsombolaAsorotany.'' [[ZanabintanaRenivintana]] ny AsombolaAsorotany. Ny tapany andrefana amin'ny rindrinzoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. "Vintam-bola"Mibaby ny [[Adizaoza]] sy vintanmitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny olona[[Adijady]] tianefa harenamitanila sy miarina eo amin'ny Asombola[[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy.
==== Adimizana ====▼
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Vintana mahery ny Adimizana nefa mety ho tsara na hahafaty mbola kely an'izay ateraka aminy. Mitrotro ny Alakarabo sy mibaby ny Asombola ny Adimizana. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. ▼
==== AlakaraboAlahasaty ====
Ny [[AlakaraboAlahasaty]] no vintana sy volana fahavalomalagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرباأسد / ''Al-AkrabAsad'' ("maingokaliona") ny hoe ''AlakaraboAlahasaty.'' Zanabintana ny AlakaraboAlahasaty. Ny tapany atsimoatsinanana amin'ny rindrin-trano andrefanaatsimo no toerana omena azy. VintanaMifandratra tsara ny Alakarabo satria andronamin'ny fahavokarana.Adalo Voalazasy famiarina terakaeo taminamin'ny vavany AlakaraboAdijady ny mpanjakavintana [[Ranavalona II]]Alahasaty. Miarina eo aminTrotroin'ny Alahamadyrenivintana sadyAsorotany mifandratra amin'ny Adaorozanabintana ny vintana AlakaraboAlahasaty.
==== Alakaosy ====▼
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' Zanabintana ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Vintana mahery indrindra ny Alakaosy. Raha tsy alam-bintana ny zaza teraka aminy dia ahohoka ho faty fa atahorana hahafaty izay lehibe noho izy. Mifandratra amin'ny Adizaoza Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. ▼
▲==== AdizaozaAsombola ====
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folofahenina ny [[AlohotsyAsombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوتالسنبلة / ''AlAs-HutSumbul'' ("trondrovirjina") ny hoe ''AlohotsyAsombola.'' [[Zanabintana]] ny AlohotsyAsombola. Ny tapany antsinanaandrefana amin'ny rindrin-trano avaratraatsimo no toerana omena azy. Vintan'olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy. Mifandratra amin'ny Asombola[[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny Adimizana[[Alahamady]] ny vintana AlohotsyAsombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola.▼
==== Adijady ====▼
==== AdaloAdimizana ====
VintanaNy sy[[Adimizana]] volanano faharaikavintana ambin'nysy folovolana ny [[Adalo]]fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلواميزان / ''Al-DaluMizan'' ("mpandraraka ranomizana") ny hoe ''AdaloAdimizana.'' [[ZanabintanaRenivintana]] ny AdaloAdimizana. Ny tapanyzoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny rindrin-tranoAlahamady avaratrasady nomitanila toeranasy omenamiarina azyeo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Vintan-dranomasoMitrotro ny [[Alakarabo]] sy alahelomibaby ny Adalo[[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana.
==== Alohotsy ====▼
▲Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny [[Alohotsy]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوت / ''Al-Hut'' ("trondro") ny hoe ''Alohotsy.'' Zanabintana ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Vintan'olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy. Mifandratra amin'ny Asombola sy miarina eo amin'ny Adimizana ny vintana Alohotsy.
▲==== AlahasatyAlakarabo ====
=== Ny vintana malagasy sy ny zodiaka ===▼
▲Ny [[AlahasatyAlakarabo]] no vintana sy volana malagasy fahadimyfahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسداعقرب / ''Al-AsadAkrab'' ("lionamaingoka") ny hoe ''AlahasatyAlakarabo.'' Zanabintana ny AlahasatyAlakarabo. Ny tapany atsinananaatsimo amin'ny rindrin-trano atsimoandrefana no toerana omena azy. LazainaMiarina hoeo vinta-mpamosavy sy andronamin'ody ny Alahasaty.Alahamady Mifandratrasady mifandratra amin'ny AdaloAdaoro syny miarinavintana eoAlakarabo. amin'Ny nyrenivintana AdijadyAdimizana nyno vintanamitrotro Alahasatyazy.
▲==== AdimizanaAlakaosy ====
▲Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' Zanabintana ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Vintana mahery indrindra ny Alakaosy. Raha tsy alam-bintana ny zaza teraka aminy dia ahohoka ho faty fa atahorana hahafaty izay lehibe noho izy. Mifandratra amin'ny Adizaoza Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy.
▲==== AlakaosyAdijady ====
▲NyVintana sy volana fahafolo ny [[AdimizanaAdijady]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزاناجدي / ''Al-MizanDjadi'' ("mizanaosilahy") ny hoe ''AdimizanaAdijady.'' [[Renivintana]] ny AdimizanaAdijady. Ny zoron-trano atsimoavaratra-andrefana no toerana omena azy. Vintana mahery ny Adimizana nefa mety ho tsara na hahafaty mbola kely an'izay ateraka aminy. Mitrotro ny AlakaraboAdalo sy mibaby ny AsombolaAlakaosy ny AdimizanaAdijady. Ny Adimizana dia mifandratraMifandratra amin'ny AlahamadyAsorotany sadysad mitanila sy miarina eo amin'ny AlohotsyAlahasaty sy ny Adaoro.Adizaoza ny Adijady.
▲==== AdijadyAdalo ====
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny [[Adalo]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلو / ''Al-Dalu'' ("mpandraraka rano") ny hoe ''Adalo.'' [[Zanabintana]] ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alahasaty]] sy miarina eo amin'ny [[Asorotany|Asorontany]] ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo.
▲==== Alohotsy ====
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny [[Alohotsy]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوت / ''Al-Hut'' ("trondro") ny hoe ''Alohotsy.'' Zanabintana ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Asombola]] sy miarina eo amin'ny [[Adimizana]] ny vintana Alohotsy. Baben'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy.
▲=== Ny vintana malagasy sy ny zodiaka ===
Raha [[Tetiandro manara-bolana|manara-bolana tanteraka]] ny tetiandro malagasy dia tsy misy ifandraisany ny [[evan'ny zodiaka]] na ny [[antokon-kintan'ny zodiaka]] sy ny volana malagasy, afa-tsy ny fitovian'anarana. Na dia atao hoe [[Tetiandro manara-bolana sy masoandro|manara-bolana sy masoandro]] aza ny tetiandro malagasy dia mbola tsy mifanandrify ihany ny volana malagasy sy ny antokon-kintan'ny zodiaka mitovy anarana aminy.
▲=== Ny orim-bintana roasy ambin'ny folozavatra mifandray aminy ===
==== Atsimo ====
Ny atsimo ao an-trano dia vazantany natokana ho an'ny fanekena ny manam-pahefana, ny fanetren-tena, ny olona anjakana, ny maha mpanompo. Lafy itoeran'ny vintana [[Asombola]] sy [[Alahasaty]] ny atsimo. Eo atsimo manandrify ny Alahasaty (ilany atsinanana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny zanak'omby. Tandrify ny Asombola (ilany andrefana amin'ny rindrina atsimo) no ametrahana ny laona sy ny fanoto.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974799"